Home » Hawaii Travel News » Teratany alemanina, Markus Krebs dia nanendry mpitantana jeneralin'ny Outrigger Reef Waikiki Beach Resort any Hawaii
Markus dia mitondra traikefa mampiantrano vahiny amin'ny fananana lafo vidy sy any amin'ny nosy voalohany mankany Outrigger
Mpitantana jeneraly vaovao voatendry ho an'ny Outrigger Reef Waikiki Beach Resort
Krebs dia tale jeneralin'ny Luxury Five-Diamond Luxury, 400-rooom Monarch Beach Resort any Dana Point, Kalifornia
Ny mpitarika mpitsabo vahiny dia manana traikefa amin'ny trano fandraisam-bahiny telo taona mahery
Outrigger Hospitality Group dia faly manambara ny fanendrena ny teratany alemà Markus Krebs ho mpitantana jeneraly vaovao an'ny Outrigger Reef Waikiki Beach Resort hatramin'ny 25 Janoary 2021.
Talohan'ny nidirany tao Outrigger, Krebs dia tale jeneralin'ny AAA Five-Diamond Luxury, 400-rooom Monarch Beach Resort any Dana Point, Kalifornia.
Nanomboka ny asany tamin'ny hotely i Krebs tamin'ny mari-pahaizana bakalorea amin'ny Hotel and Catering Management avy amin'ny Hotelfachschule Dr. Robert Eckert any Regenstauf, Bavaria.
Ny mpitarika mpitsabo tranainy dia manana traikefa amin'ny trano fandraisam-bahiny telo taona mahery, miaraka amin'ny fanamafisana lehibe amin'ny sehatry ny rendrarendra. Ny fitiavany ny indostria dia nanomboka fony izy mbola mpianatra tao amin'ny hotely fitantanana hotely, izay niasa haingana hatrany amin'ny toerana samihafa, anisan'izany ny talen'ny birao anoloana, mpitantana trano fisakafoanana, talen'ny sakafo sy zava-pisotro, mpitantana mponina ary tale jeneraly. Ny ezak'izy ireo dia nanampy tamin'ny fampiakarana ny trano fandraisam-bahiny ho lasa fananana malaza sy nahazo loka.
Miaraka amin'ny tantaran'ny asa manerana ny kaontinanta efatra, nitana andraikitra ambony amin'ny fitantanana hotely i Krebs amin'ny fitadiavana toerana fialantsasatra sy fitsangatsanganana toa an'i Alemana, California, Chicago ary Bangkok, ary koa ny morontsiraky ny atsimon'i Thailandy, ny Nosy Bazaruto atsimo atsinanan'ny Mozambika ary ny Nosy Hawaii - toerana niasany tao amin'ny Fairmont Orchid.
"Markus dia mitondra traikefa amin'ny fandraisam-bahiny amin'ny fananana mihaja sy any amin'ny nosy voalohany mankany Outrigger," hoy i Mike Shaff, VP an'ny asa ao amin'ny Outrigger Hospitality Group. "Niara-niasa akaiky tamin'i Markus aho teo aloha, fantatro manokana fa hitarika eo alohany izy mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny asa sy ny fitiavany mandray vahiny dia hikolokolo ny fifandraisana, ny hafanana ary ny fanavaozana eo amin'ny vahininay sy ny mpampiantrano."
“Miverina any Hawaii hitarika ny sary masina Outrigger Reef Waikiki Beach Resort rehefa mandeha sambo amin'ny tongotra vaovao amin'ny diany izy dia nofinofy tanteraka, hoy i Krebs. “Manomana fandaharam-pianarana iray ho an'ny vanim-potoana fizahantany aorian'ny COVID vaovao izahay, izay ankafizin'ny mpampiantrano sy ny vahiny ny maha-ampahany amin'ny traikefa fandraisam-bahiny tena izy; Manantena ny handray mpitsidika an'ity toeram-pivarotana mahafinaritra ity aho. ”